thinzar's blog: An unplanned visit to Batu Caves
အဟား ကပ်စီးနည်းတာ လူတွေသိကုန်ပီ.. ၁ရင်းဂစ်ဆိုပြီး မဝင်ခဲ့တာရယ်.. ၃၅ ရင်းဂစ်ဆိုပီး မဝင်ခဲ့တာရယ် :-P :-P
25/3/12 9:14 PM
အဲပန်းခြံကို ၇ကျပ် ပေးဝင်ရမှာ ရင်နာပါတယ်ကွယ်.. ဟို cave ထဲတော့ သွားချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အထဲမှာဘာရှိသလဲဆိုတာ homework ကြိုမလုပ်လာတော့ မဝင်ရဲဘူး။ ခုမှ သူများ blog တွေဖတ်ပြီး cave ထဲဝင်ချင်လာတယ်။ ကပ်စီးနည်းတာ ကောင်းပါတယ်။ လူတွေသိကုန်တော့ ပိုတောင်ကောင်းသေး :D
25/3/12 10:38 PM
ဟိုးးအတြင္းထဲထိ ဝင္ခဲ႔ရမွာ. း)
ကိုယ္တိုင္မေရာက္ေသးေတာ႕ သူမ်ားေတြရိုက္လာတာ ၾကည္႔ခ်င္လို႕ေလ :P
26/3/12 9:11 PM
မေခ်ာ>> ဟုတ္တယ္အစ္မ.. ပင္းတယဂူတို့ ဘာတို့နဲ့စာရင္ ေတာ္ေတာ့္ကိုျမင့္တယ္။ ေသခ်ာေလ့လာဖို့ ၾကု့ရင္ ေနာက္တစ္ေခါက္သြားၾကည့္ခ်င္ေသးတယ္ :)
Batu Cave & Salayang...wanna go :P
Ma Su Khine
28/3/12 4:04 PM
28/3/12 7:23 PM
I really really wanting to go there... I don't know why the big statue and the cave behind give me goose bump whenever i passby from the coach. I am thinking to visit to KL but don't know what others places to go and do? and what are the safe place to go for tourist. I have been to others places in Malaysia, but not really stay long in KL before.
13/4/12 3:46 PM
mabaydar>> the big statue, the panoramic view of KL and the caves is worth the visit. If u don't go to suburb areas, it's quite safe, but better go inagroup..Taxi touts are everywhere..
Going around the town with KL hop-on-hop-off bus could beagreat idea, u can visit most tourist attractions within one day. Other places like Sunway pyramid/lagoon, i-city in Shah Alam, Putrajaya are also nice places, but pulbic transport is kinda difficult to those places.. :)
15/4/12 1:15 PM